अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला समिति काठमाडौं र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले टुटल, पठाओ, सरर र निजी कारहरूले ट्याक्सीजस्तै यात्रु ओसारपसार गर्नेमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध जायज रहेको टिप्पणी गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सरकारले अवैध सवारीसाधनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध जायज रहेको भन्दै सरकारको उक्त कदमप्रति आफूहरूको पूर्ण साथ र समर्थन रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ विशेष जिल्ला समिति काठमाडौं र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले विगत लामो समयदेखि ट्याक्सी क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई विभिन्न समयमा मागपत्र पेश गरेको भन्दै उनीहरूले खासगरी वैज्ञानिक भाडा प्रणाली विकास गरी उचित ढंगले ट्याक्सीको मिटर भाडा समायोजन गर्न र गैरकानुनी ढंगले प्रयोजनविपरीत सञ्चालन हुँदै आएका दुई तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनउपर प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
अवैधानिक सवारीसाधनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध जायज
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला समिति काठमाडौं
राज्यले पछिल्लो समय अवैधानिक सवारीसाधनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध जायज छ । सरकारको यो कदम देखावटी नभइकन दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको निम्ति प्रेरणदायी बनोस् । विधि र कानुनी शासनलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल तुल्याउनका लागि ट्याक्सी चालकहरूको भूमिका के हो ? र राज्यले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? हामीलाई पनि सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल तुल्याउने महाअभियानमा भूमिका दिनुपर्छ । साथसाथै, अहिले रहेको भाडादर प्रणालीले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई हामीले सेवा दिन सक्दैनौं । सरकारले वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् । भाडा समायोजन नभए र अवैध सवारीसाधनले सेवा सुचारु गरे भ्रमण वर्षलाई असहयोग गर्नेछौं । वर्तमान राज्य व्यवस्था हामीजस्ताकै रगत, पसिनाले प्राप्त भएको हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको पक्षपाति हुनका नाताले कानुनी रूपमै सरकारले हाम्रो समस्याको निराकरण गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वास व्यक्त गर्दछौं । अन्यथा गैरकानुनी ढंगले व्यवसाय गर्न र धन आर्जन गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने हामी पनि हाम्रो अधिकार र पेशागत रक्षार्थ भौतिक रूपमै सडकमै आएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्दछ । त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिनका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन अनुरोध गर्दै अवैधानिक रूपमा कालोधन आर्जन गर्ने क्रियाशील तत्वहरूलाई सचेत गराउन चाहान्छौं । उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन सम्पूर्ण ट्याक्सी व्यवसायी तथा पेशाकर्मी चालकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र कदम आपत्तिजनक
विधिको शासनअनुसार सबै चल्नुपर्दछ । टुटल, पठाओ र सरर अवैध रूपमा चलेका छन् । निजी प्रयोजनका सवारी पनि यात्रु ओसारपसारमा लागिरहेका छन् । यो कार्यलाई सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । हामीले धेरै लामो समयदेखि यसबारेमा ध्यानाकार्षण गराउँदै आएका छौं । हामीसँग सरोकार राख्ने हरेक निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । सरकारले पछिल्लो समय चालेको कदम स्वागतयोग्य छ । तर, हामी प्रविधिको विरोधी हैनौं । टुटल, पठाओ र सररजस्ताको अवैध धन्दा बन्द हुनुपर्छ । उनीहरू विधिमा आउनुपर्छ । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टुटल, पठाओ, सरसरलाई अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि चल्न दिने भनेर मौखिक निर्देशन दिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति र कदम आपत्तिजनक छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहान्छु, तपाईं कानुनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर तपाईंले अहिले त्यही कानुनलाई कुल्चिनुभयो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै सुझबुझबिना यस्तो गलत र गैरकानुनी निर्देशन दिनु लज्जास्पद छ ।
सरकारले अवैध सवारीसाधनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध जायज छ । सरकारले अवैध सवारीसाधनलाई नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध नलगाए आफूहरू प्रतिवादमा उत्रिने छौं । सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध भोलि टुटल, पठाओ र सररले विरोध तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने सूचना आएको छ, यदि राज्यले उनीहरूलाई नियन्त्रण नगरे हामी पनि उनीहरुरूविरुद्धमा शक्ति प्रदर्शन गर्न तयार छौं । राज्यले यसप्रति बेलैमा सचेतता अपनाओस् । पछिल्लो समयमा माथि उल्लेखित मागहरूको बारेमा सरकारले सकारात्मक रुपले ग्रहण गरी टुटल, पठाओ र सररका नाममा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ मंसिर ३ गते सूचना प्रकाशित ग¥यो । उक्त सूचना जारी भएपश्चात् पनि अटेर गरेको अवस्थामा हाम्रो समेत संलग्नतामा यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले प्रयोजनविपरीत सञ्चालन भएका दुई तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनउपर कारबाही सुरु ग¥यो । यस सन्दर्भमा हामी यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीको कदमलाई स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ बमोजिम रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले सार्वजनिक रूपमा यात्रु ओसारपोसार गर्न बन्देज गरेको अवस्थामा टुटल, पठाओ र सररका नाममा गरिएको गतिविधि पूर्णतः गैरकानुनी भएको र उक्त कम्पनीहरूको गतिविधिले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको उपहास गरेको यथार्थ आम जनसमुदायमा स्मरण गराउन चाहान्छौं ।
टुटल, पठाओ र सररले भोलि गर्ने विरोध प्रदर्शनविरुद्ध हामीहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौं । उनले टुटल, पठाओ, सरर र निजी सवारीसाधनले कर नतिरी आयआर्जन गरेको छ । हामी विधि र विधानअनुसार चल्दै आएका छौं । राज्यले हामीलाई चाहिँ २७ थरीको दोहोरो कर लगाएको छ । वि.सं २०६९ देखि अहिलेसम्म पनि भाडा समायोजन गरेको छैन । हामी ठूलो पीडामा छौं । तर, टुटल, पठाओ र सररलाई आफूखुसी भाडा तोक्ने अधिकार कसले दियो ? यो त दिउँसै लुट हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सूचना र समाचारअनुसार टुटल, पठाओ र सररले आज (मंसिर ११ बुधबार) दिनको ११ बजे सरकारले चालेको कदमविरुद्ध सडक शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । उक्त कम्पनीमा रोजगारीको नाममा संलग्न युवालाई कानुन आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर माथि उल्लेखित कम्पनीहरूले समाजमा दण्डहिनता र अराजकता संस्थागत गर्दै गैरकानुनी धन्धा सञ्चालन गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न उद्धत रहेकोतर्फ सचेत रहन अनुरोध गर्दछौं ।